Guyana Tourism Authority inotangisa SAVE Travel Guide
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Guyana Breaking News » Guyana Tourism Authority inotangisa SAVE Travel Guide
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Fashoni Nhau • Hurumende Nhau • Guyana Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
The Guyana Tourism Chiremera yakagadzira uye yakatanga dhijitari SAVE Yekufambisa Gwara, yekutanga yechigadzirwa chekushanya cheGuyana chakanangana nesainzi, kudzidza, kuzvipira, uye chikamu chekufamba chinodzidzisa.
Sayenzi, Dzidzo, Kuzvipira, uye Kudzidzisa (SAVE) kufamba ndeimwe yezvikamu zvinokura zveguyana zvekuGuyana, izvo zvine mutsigo zvinowirirana pakuchengetedza kwekushanya - imwe yeembiru dzekushanya dzeGuyana. SAVE kufamba inobatanidza vafambi vane mutoro, vangave vari vadzidzi, vatsvagiri kana vadzidzi, pamwe nevashandi vekushanya vanobatana pamwe nemahotera ekuita nzendo dzakatarwa dzakanangana nekukura kwemunhu, kutsvagurudza kwesainzi, kupa kune zvakanaka zvinoitika munharaunda, uye / kana kuwana ruzivo kana kiredhiti yezvidzidzo mukati Sango reGuyana uye savannah matunhu.
Iyo SAVE Yekufambisa Nhungamiro yakagadziridzwa kuti ibatsire kusimbisa iyo Sainzi, Yedzidzo, Kuzvipira, uye Yezvikamu zvikamu zvechikamu muGuyana uye inosimudzira kuvandudzwa kweakawedzera SAVE mafambiro ekufamba kunzvimbo dzakashanyirwa zvishoma dzeGuyana uye kuwedzera kushanya kune dzakakurumbira nzvimbo dzekushanya panguva yechinyakare 'off yepamusoro 'kana kunaya kwemwaka. Izvi zvinobvumira mari yekushanya kuti igovaniswe zvakaenzana munzvimbo uye mukati megore.
Iri gwaro rinotarisira kusimbisa hukama pakati pevatsvagiri, masangano anodyidzana, SAVE vanofamba vanofamba uye vanopa zvirongwa uye kusimudzira ruzivo uye kudiwa kwemusika mumisika yakakosha yeGuyana - kusanganisira United Kingdom, Benelux, misika inotaura chiGerman neNorth America.
Masangano emunharaunda uye dzimba dzekugara dzinobatsira kubva kune vafambi idzi dzinosanganisira asi hadziganhurwe kuIwokrama International Center yeKuchengetwa kweMvura neRusununguko, Karanambu Lodge, Surama Eco-lodge nemusha, uye Waikin Ranch.
Brian O'Shea, akabata Ph.D. muBiological Sayenzi uye parizvino anobva kuNorth Carolina Museum ye Natural Sayenzi, ndiye aive anotungamira munyori wegwara zvichibva paruzivo rwake rwakakura rweiyi niche yekufamba uye pachezvake SAVE mafambiro ezviitiko kuGuyana.
“KUCHENGETA kufamba kunofambiswa nechishuwo chekuva nehukama hwepedyo nemasikirwo, tsika nevanhu vekwavanenge vachienda uku uchifambira mberi neruzivo uye uchibatsira mukusimudzira nyika inogarwa. Ndagara ndichifunga kuti Guyana ine mukana wakakura wekuvandudza hukama hwakasimba munzvimbo ino uye wakakudzwa kuve mumwe wechirongwa ichi, "akadaro Brian O'Shea.
Vaimbove vatungamiriri veGuyana Tourism Authority vakagovana mazwi akafanana: "Guyana yakasarudzika kuti ienderere mberi mukutsvagisa, kudzidza, uye zvirongwa zvebasa zvinopemberera zvese zvinopihwa nenyika senzvimbo inotungamira inoenderera uye zvinobatsira kuwedzera zvinobatsira. zvekushanya munyika, "akadaro Brian T. Mullis, aimbova Director weGTA.
Carla James, director aripo, anoenderera mberi achiti, "Ndinodada zvikuru nedanho rakaitwa neGuyana mumakore achangopfuura kuti izivikanwe senzvimbo inopa hupenyu hwechokwadi, hwetsika uye hwekuchengetedza zviitiko zvine chekuita nekuchengetedza izvo zvinobatsira kudzosera Nyika. SAVE Travel Guide ichabatsira kusimbisa ruzivo rwechigadzirwa ichi mumusika uri kukura. ”
Iri gwaro rinouya panguva iyo kufamba uye kushanya kwekushanya kuri kuchinja muchiedza che COVID-19 denda. Vafambi vazhinji vari kutarisa kushanya kushoma kwakazara, zvisikwa-zvakavakirwa zvinotarisa mukuvandudza nekuchengetedza zvisikwa nemhuka dzesango. Iyo SAVE Yekutungamira Yekufambisa ichabatsira kuwedzera kusimbisa iyi rondedzero uye inogona kushandiswa sechinhu chakakosha kune vafambi vachironga kwavo 2021 yekutsvaga, kudzidza uye sevhisi nzendo.